Varimi vokurudzirwa kutengesera kunze | Kwayedza
Varimi vokurudzirwa kutengesera kunze
31 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-30T20:22:58+00:00 2020-01-31T00:02:31+00:00 0 Views
VARIMI vari kumativi mana enyika vokurudzirwa kurima zvirimwa zvinopa mari nekukasika zvakadai semaruva.
VARIMI vekuMashonaland East nevamwe vari kumativi mana enyika vokurudzirwa kushandisa nzira dzemazuvano (smart agriculture) kuburikidza nekurima zvirimwa zvinopa mari nekukasika zvakadai semiriwo nemaruva izvo vanozotengesa kunze kwenyika uyewo nekurima mbesa dzinotirira muzuva.
Smart agriculture inzira yekusandura marimiro muindasitiri yezvekurima nechinangwa chekuti murimi avandudze basa rake nekushandisa nzira itsva kuti awedzere goho nekuwana mari yakawanda.
Makore ano, varimi vakawanda havazi kukohwa sezvavanenge vakatarisira nekuda kwekushomeka kuri kuita mvura yekunaya.
Chamangwiza wesangano reZimbabwe National Farmers Union (ZNFU) VaEdward Dune vanokurudzira varimi kuti varime zvirimwa zvinoenderana nekusanduka kwemamiriro ekunze.
“Tiri kuyambira varimi vedu kuti vangwarire kusanduka kuri kuita mamiriro ekunze vorima zvirimwa zvinoenderana nenzvimbo dzavari zvakadai semaruva nemiriwo yakasiyana,” vanodaro VaDune.
Varimi vari kukurudzirwawo kurima vachishandisa nzira dzinochengetedza nharaunda uyewo nekuita mabhindauko ekukohwa mvura.
Mashonaland East Provincial Agricultural Extension Officer VaLeonard Munamati vanoti varimi vanofanira kutsvaga nzira dzekuti ivhu ravo repamusoro risakukurwe nemvura sezvo riine kudya kwakakosha kunodiwa nezvirimwa.
“Tiri kukurudzira varimi kuti vave nenzira dzekuchengetedza ivhu dzinosanganisira kuvhara ivhu repamusoro nezvakadai semashizha kana huswa sezvo zvichideredza kukukurwa kwevhu uye kuti rigare riine mwando,” vanodaro VaMunamati.
Vamwe varimi kudunhu iri vanoti Hurumende inofanira kuvakisa madhamu akawanda kuti varime zvirimwa zvemugadheni.
Mai Prisca Mashoka vekuHwedza vanoti, “Tinorarama kuburikidza nekurima matomatisi nemuriwo. Tinoda mvura nekudaro tiri kukurudzira Hurumende kuti ivakise madhamu kuti tirime zvizere.”
VaBrigton Mudoka vanove murimi wekwaMurehwa vanoti kusanduka kwemamiriro ekunze kwauya vasingafungire uye havasati vava kuziva kuti mvura yekunaya ichavakwanira here.